Uma ubhalisile nge-MTS, cishe, cishe usuvele uzwile mayelana nensizakalo enjalo njengokuthi "Ukukhokha okulula". Kulabo abacabanga ukuthi insizakalo enjalo ivumela kuphela ukudlulisa imali kusuka enombolweni eyodwa kuya kwi-akhawunti yomunye, kuphutha kakhulu. Ngenxa yesevisi okukhulunywe ngayo ekuqaleni, kungenzeka ukhokhe cishe noma yikuphi ukuthenga, ukukhokhela izikweletu zesevisi, njll Funda kabanzi mayelana nokwenza i-Easy Payment (MTS) kusuka efonini, ukuthi kufanele ukhokhe kangakanani ukusebenzisa isevisi, nokuthi ungayisebenzisa kanjani Ukusebenza kwezezimali - sizoxoxa kule ngxenye.
Isevisi "Yokukhokha Elula" itholakala kubo bonke ababhalisile be-MTS, uma nje benesimo sabantu ngabanye futhi bahlinzekwa ngemigomo efanelekile. Kubasebenzisi bebhizinisi be-SIM khadi ye-opharetha omhlophe obomvu, le nketho ayinikeziwe. Yiziphi izici zale nsizakalo? Ngingawuvala kanjani insizakalo kwi-MTS "Inkokhelo elula"? Yiziphi izici onayo? Konke lokhu esizoxoxa ngakho ekuqaleni. Futhi manje ake sikhulume ngokuthi indlela elula kanjani le ndlela iwukuba opharetha weselula.
Ukukhokhwa kwempahla kanye nezinsizakalo ngokusebenzisa isevisi "Yokukhokha Elula" kungenziwa kokubili ngezindleko ezibekiwe kwi-SIM khadi futhi ngemali yemali etholakala ekhadini lebhange lababhalisile (ngaphambi kokudlulisa imali ekhadini, kuzodingeka ukuthi ulixhumanise ne-akhawunti yakho - imininingwane izoboniswa ku-akhawunti yakho). Yikuphi okukhethwa kukho, kanye nokusebenzisa uhlelo lokusebenza "Ukukhokha okulula" (MTS) noma ungakhawulela iKhabhinethi yakho siqu - umsebenzisi we-opharetha weselula uyazikhethela ngokwakhe.
Njengoba kushiwo ngaphambili, kuphela okungokwenyama okungasebenzisa le nsizakalo. Ubuso.
Esikhathini sesibhalansi, ngesikhathi sokuthengiselana ngesevisi embuzweni, kumele kube okungenani ama-ruble ayishumi; Ngenkathi ukusebenza komsebenzi wokukhokhelwa kwezimpahla nezinsizakalo, ukubuyiselwa kwemali mboleko, njll, akukwenziwanga ngezindleko ze-opharetha (okungukuthi uma ukukhokha okuthenjisiwe noma inketho ethi "Full Trust" isebenza).
Ukukhokhwa kwezimpahla ze "Isaphulelo" akunakwenzeka ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza "Ukukhokha okulula" (MTS).
Akunakwenzeka ukwenza imisebenzi engaphezu kwamahlanu yokudlulisa imali / ngosuku ngosuku.
Ngokuthengiselana okulodwa, ungadlulisela inani elingadluli ama-ruble ayizinkulungwane eziyishumi nanhlanu.
Uma ungafuni ukusebenzisa le nsizakalo, ubhalisile angashintsha inketho ye-MTS Easy Payment.
Ngezinsuku eziyisikhombisa zekhalenda, akukho ama-ruble ayizinkulungwane eziyikhulu angasetshenziswa.
Umkhawulo wansuku zonke usethelwe emkhawulweni wezinkulungwane ezingamashumi amathathu.
Ikhomishana ingakhokhiswa ngokusebenza kwemisebenzi, lowo obhalisile uzokwaziswa ngokutholakala nokubaluleka kwayo ngaphambi kokwenza inkokhelo - imali eyengeziwe izoxhomeka esigabeni esikhethiwe samasevisi noma izimpahla ezidinga ukukhokhwa ngale nsizakalo.
Ngaphambi kokuthi ukhulume ngokuthi ungakhubaza kanjani inombolo ye-MTS Easy Transaction, kufanele unikele ngolwazi mayelana nokusetshenziswa kwalo. Ukusebenza kokukhokha kuyatholakala kokubili ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi sewebhu, nangokusebenzisa i-analog yayo - uhlelo lokusebenza lweselula. Uhlelo lwe-Smartphones kanye namaphilisi, alandiwe emakethe efanelekile yezinhlelo zokusebenza, lukhululekile futhi likuvumela ukuba wenze zonke izenzo ezifana nehhovisi lomuntu we-MTS yokubhalisa. "Ukukhokha okulula" nakho kungakhutshazwa ngale ndlela.
Ngakho, ukuze uqale ukusebenzisa isevisi embuzweni, udinga:
Faka uhlelo lokusebenza lweselula - uma kwenzeka kuhlelwe ukwenza imisebenzi ekuhumusheni ngale ndlela.
Thola ukungena ngemvume nephasiwedi ukufaka i-akhawunti yakho siqu - uma esikhathini esizayo umbhalisile uhlela ukwenza izenzo nge-akhawunti ngokusebenzisa isiphequluli sekhompyutheni.
Isicelo sokudayela * 115 # - ngale nsizakalo ungakhetha futhi izigaba zokukhokha futhi, ngokulandela ukuhamba kwesistimu, ukhokhele izimpahla namasevisi, udlulisele imali kuma-akhawunti wabanye ababhalisile.
Ukusebenzisa i-Interface Web
Uma usebenzisa iKhabhinethi yomuntu siqu nesicelo samagadgets ephathekayo emva kokugunyazwa, kubalulekile ukuya esigabeni esifanele futhi uqhubeke nokukhethwa kwezinsizakalo okumele kwenziwe ngayo inkokhelo. Uma kwenzeka udinga ukudlulisela izimali ezivela ku-akhawunti yedivayisi yeselula, akudingeki ukuba ubophe ikhadi lebhange. Uma kungenjalo, ngaphambi kokwenza inkokhelo, kuzomele wenze izinyathelo eziningana zokubhalisa ikhadi lebhange.
Ukukhipha ithuba lokukhokha kusuka kwinombolo ethize nge-"Ukukhokha okulula", kufanele:
Khubaza ukukhokha okulula (i-MTS) ku-akhawunti yakho;
Faka inhlanganisela * 111 * 1 # - obhalisile uzokwaziswa mayelana nokusebenza komsebenzi ngombhalo wombhalo, ozofika emaminithini ambalwa emva kwesicelo esenziwe;
Shayela inamba yokusekelwa kwamakhasimende (ucingo alukhokhisiwe, uma nje lenziwe nge-SIM khadi yomqhubi, kungenjalo kufanele usebenzise inombolo 88003330890, ucingo luzokhululeka nanoma yiliphi i-SIM khadi noma ifoni yomhlaba).
Ubufakazi bamakhasimende mayelana nensizakalo "Yokukhokha elula"
E-intanethi, ungathola ukubuyekezwa kokubili kwamakhasimende anelisekile nalabo okusetshenziselwa isevisi kubonakala kungenjongo. Ngokuyinhloko, lokhu kungenxa yezici eziningana:
Inzalo ephezulu uma wenza izinkokhelo;
Abathengi be-MTS bashaya ukuthi kunengozi ukuthi abaqashi bazoyisebenzisa ngokunenzuzo isevisi;
Ukuthi insizakalo ye-MTS yenkampani "Ukukhokha okulula" - isehlukaniso, ukubuyekezwa kungatholakala nasemithonjeni eyaziwayo evumela abantu ukuba babelane ngemibono ngezinkampani ezithile, izinsizakalo kanye nezinsizakalo - emva kwakho konke, ngokombono wabo, inkonzo ayiphelelwanga ngokugcwele futhi kukhona ithuba Ukuvuza kwedatha.
Ngesikhathi esifanayo, iningi labasebenzisi okumele bakhokhele amasevisi e-Easy Transfers (MTS) kusuka efonini nakwezinye izindlela, ubhala izindlela eziningi zokukhokha, kanye nokulula nokulula kwemisebenzi lapho ukudluliselwa kwenziwa khona ukukhokhela isigaba esikhethiwe samasevisi.
Iyini "Ukukhokha Okuthenjisiwe kwe-MTS"? Ungayenza kanjani isevisi?